को–को छन् देउवाका सारथि ? – Tourism News Portal of Nepal
२५ असार, काठमाडौं । जुझारु टिमकै कारण नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति र चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्न सफल भएको मानिन्छ । तर, पार्टीको मूल कमान्ड सम्हालेयता देउवाको पुरानो टिम भत्कँदै गएको छ भने नयाँलाई विश्वास गर्न नसक्दा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बित्न लाग्दासमेत उनले सचिवालय र सल्लाहकार समूह बनाउन सकेका छैनन् ।
आखिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यतिखेर कसले सहयोग गरिरहेको छ ? मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बित्दा पनि भतिज भानु देउवा र वीरन्द्र मल्ल मात्रै उनको सहयोगीका रुपमा छन् । यद्यपि, उनीहरुलाई पनि सचिवालयको टिममा नियुक्त गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवालाई नेता विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँणसहितको नेताले राजनीतिक विषयमा सहयोग गर्दैै आइरहेको छ ।